Season2အနေနဲ့ တစ်ဖန်ပြန်လည်ထွက်ရှိလာတော့မယ့် Netflix Show ”Busted!” – Trend.com.mm
ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံး Netflix Variety Show ဖြစ်တဲ့ Busted! စီးရီးကတော့ ဒုတိယseason အနေနဲ့ ပြန်လည်ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ season ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက် ကြည့်ရှုသူတွေစိတ်မပျက်စေရပါဘူးလို့ Netflix က ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
” ကြေငြာပြီးချိန်မှာ ပြည်တွင်းကရော ပြည်ပဆီကပါ တုံ့ပြန်မှုတွေ အများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ အံ့သြထူးဆန်းဖွယ်ရာအကြောင်းရာတွေနဲ့ ရယ်စရာဇာတ်မြူးလေးတွေ တွဲဖက်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကြည့်ရှုသူဦးရေကို ကျွန်တော်တို့ မြှင့်တင်သွားမှာပါ ” – Netflix
” Busted! ဇာတ်ကားအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိတ်သတ်တွေဆီက အားပေးမှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ Season2မှာလည်း ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ level တစ်ခုနဲ့ ပိုပြီးကြည့်ကောင်းအောင် ပရိတ်သတ်တွေကို ပေးဆပ်သွားမှာပါ ” — Jang Hyuk Jae PD
Busted! ဇာတ်ကားကို Running Man PDs တွေဖြစ်တဲ့ Cho Hyo Jin, Jang Hyuk Jae, Kim Joo Hyung တို့ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်များကတော့ – Yoo Jae Suk, Ahn Jae Wook, Kim Jong Min, Lee Kwang Soo, Park Min Young, EXO‘s Sehun နဲ့ gugudan‘s Sejeong တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Season2မှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် အနုပညာရှင်များကတော့ လတ်တလော မသိရသေးပါဘူး။
ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံး Netflix Variety Show ဖွဈတဲ့ Busted! စီးရီးကတော့ ဒုတိယseason အနနေဲ့ ပွနျလညျထှကျရှိလာတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ပထမ season ထကျ ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျ ရိုကျကူးထားတဲ့အတှကျ ကွညျ့ရှုသူတှစေိတျမပကျြစရေပါဘူးလို့ Netflix က ကွငွောလိုကျပါတယျ။
” ကွငွောပွီးခြိနျမှာ ပွညျတှငျးကရော ပွညျပဆီကပါ တုံ့ပွနျမှုတှေ အမြားကွီးရရှိခဲ့ပါတယျ။ အံ့သွထူးဆနျးဖှယျရာအကွောငျးရာတှနေဲ့ ရယျစရာဇာတျမွူးလေးတှေ တှဲဖကျပွီး တဈကမ်ဘာလုံးကွညျ့ရှုသူဦးရကေို ကြှနျတျောတို့ မွှငျ့တငျသှားမှာပါ ” – Netflix
” Busted! ဇာတျကားအတှကျ တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိတျသတျတှဆေီက အားပေးမှုတှရေရှိခဲ့
တဲ့အတှကျ ကြှနျတျောအရမျးဝမျးသာပါတယျ။ Season2မှာလညျး ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့ level တဈခုနဲ့ ပိုပွီးကွညျ့ကောငျးအောငျ ပရိတျသတျတှကေို ပေးဆပျသှားမှာပါ ” — Jang Hyuk Jae PD
Busted! ဇာတျကားကို Running Man PDs တှဖွေဈတဲ့ Cho Hyo Jin, Jang Hyuk Jae, and Kim Joo Hyung တို့ ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျမြားကတော့ – Yoo Jae Suk, Ahn Jae Wook, Kim Jong Min, Lee Kwang Soo, Park Min Young, EXO‘s Sehun နဲ့ gugudan‘s Sejeong တို့ဖွဈပါတယျ။ Season2မှာ သရုပျဆောငျမယျ့ အနုပညာရှငျမြားကတော့ လတျတလော မသိရသေးပါဘူး။